Shiinaha Sidee heerka ruuxa shaqeeyaa warshad iyo saarayaasha | Jiabei
tube Heerka heerka ruuxa laga sameeyey oo muraayad. darbigiisa gudaha hoose tube heerka waa dusha a qalooca la gacan gaar ah dhaf. tube wuxuu ka kooban yahay dareere ah. Marka heerka waxaa janjeerin, naqas in dhammaadka heerka dhaqaaqo tube heerka si loo ogaado booska heerka. The ka weyn gacan ka mid ah dhaf derbiga hoose oo heer ruuxa, sare ee xallinta, iyo yar ee gacan ka mid ah dhaf, ay hoos u xallinta. Sidaa darteed, gacan ka mid ah dhaf ah oo heer ruux ay go'aamiso saxnaanta heerka ruuxa. heerka ruux ayaa waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu baadho ee flatness, toosnaanta, verticality iyo booska siman ee rakibo qalabka qalabka kala duwan iyo mashiinada workpieces. Gaar ahaan marka lagu qiyaaso verticality ah, heerka magnetic la nuugo karaa dushiisa taagan shaqo la'aan taageero buugan, taas oo yaraynaysa xoojinta shaqada iyo iska ilaalisaa in qaladka cabbirka ay sababtay shucaac kulaylka heerka jirka aadanaha ee.
The hoose iyo dhinac ee heer ruuxa yihiin dhismayaasha xaq-xagal la dherer ah 2000mm, iyo saxnimada waa guud ahaan (0.02-0.025) mm / m. Haddii user uu leeyahay shuruudo gaar ah, waa la beddeli karaa si gaar ah. Dhismaha Bibi ay heerka ruuxa waa mid gaar ah, iyada oo qaab-dhismeedka caadiga ah marka la barbar dhigo: 1. Waa sahal in la eber. 2. Ka dib markii la qabsiga, booska eber ma fududa in isbedel. Sida ku cad Jaantuska 1. Marka hoose ee jeexdin V-qaabeeya ee waa wareegto heer ruux agagaarka xudunta u ah dhidibka 5 jeer, haddii naqas guurto, waxaad kula kulmi kartaa shuruudaha by qabsado fur 2. item waxaa loo habeeyaa Warshadda iyo guud ahaan isbeddelin.
Dhismaha heerka ruuxa kala duwan yihiin sida ay u kala soocidda. Heerka ruux nooca jir waxaa guud ahaan ka kooban jirka heerka ruuxa ugu weyn, heer siman, inaanu ah adiabatic, heerka ugu weyn, saxan cover a iyo qalab eber saxayo. heerka taliyihii guud ahaan ka kooban jirka heerka, saxan cover a, heerka ugu weyn iyo qalab eber saxayo.
heerka ruuxa wuxuu isticmaalaa heerka ruux sida qalab qiyaaseed ee cabbiraadda iyo akhrinta xubno ka ah. Heerka waa tuubo galaas shaabadeeyey, iyo qaybta gaadhya ee dusha hoose waa dusha wareeg ARC la gacan gaar ah dhaf. Tuubada muraayad u ah heerka waxaa ka buuxsamay dareere ah la Wehliyaha ah ku nafwaayay ku yar yahay, sida khamriga, ether iyo dar. Qaybta aan dareere ah waxaa badanaa loogu yeeraa xumbo heer. Waxaa jira xiriir gaar ah oo u dhexeeya gacan ka mid ah dhaf ah qaybta gaadhya dusha hoose oo tube galaas iyo qiimaha qalin. Sida laga soo xigtay xiriirka this, rabitaan ee diyaarada qiyaasay la qiyaasi karin.
waqti Post: Jan-09-2020
8 Line Oo 4 Horizontal Line , Wall labixiyo , Total Station , Tripod , aqbalana , Vh-525 Five Line ,